Wararka - Xalka dhismooyinka
Kordhiyo - halis la dhayalsaday
Sare u kaca waa khatar inta badan la dhayalsan karo. Qulqulka 'danabyada' danab (ku-meelgaar ah) ee qaadanaya laba ilbidhiqsi oo keliya waxaa sababa danab toos ah, u dhow iyo danab birqaya ama hawlgallada adeegga korantada.
Hillaac toos ah iyo mid dhowba
Hillaacyada tooska ama ku dhow dhow waa danab ku dhaca dhisme, u dhowaanshaha ama safafka soo galaya dhismaha (tusaale ahaan nidaamka korantada tamarta yar, isgaarsiinta iyo khadadka xogta). Baaxadda iyo tamarta ka dhalanaysa qulqulka qulqulka iyo kicinta iyo sidoo kale aagga elektromagnetic-ka ee la xiriira (LEMP) wuxuu si aad ah ugu hanjabayaa nidaamka in la ilaaliyo.
Hillaaca xilligan ka dhasha danab toos ah oo ku socda dhisme wuxuu keenaa sare u kac ku yimaadda suurtagalnimada dhowr 100,000 oo volts oo ku saabsan dhammaan qalabka dhulka ku jira. Kordhinta waxaa sababa hoos u dhaca korantada ee cilladaha caadiga ah ee dhulka iyo natiijada ka dhalan karta dhismaha ee la xiriirta deegaanka. Tani waa culeyska ugu badan ee nidaamka korantada ee dhismayaasha.
Marka lagu daro hoos u dhaca korantada ee cilladda caadiga ah ee dhulka, kororka ayaa ka dhaca rakibidda korantada ee dhismaha iyo nidaamyada iyo aaladaha isku xiran sababo la xiriira saameynta soo-kicinta ee danab danab elektromagnetic. Tamarta kororka qulqulatooyinkaan soo kordhay iyo qulqulka qulqulatooyinka ka dhasha ayaa ka hooseeya kan tooska ah ee hillaaca tooska ah ee hadda socda.
Hillaacyada fog ayaa ku dhaca hillaac aad uga fog shayga la ilaalinayo, shabakadda khadka sare ee danab dhexdhexaadka ama ku dhowaadkeeda iyo sidoo kale daruuraha daruur-daruur ah.
Hawlaha wareejinta ee korantada korontada waxay keeneysaa kor u kac (SEMP - Bedelida elektromagnetic pulse) ilaa 1000 volts nidaamyada korantada. Waxay dhacaan, tusaale ahaan, marka culeysyada wax kiciya (tusaale, kuwa wax kala beddela, kuwa wax kiciya, matoorrada) la demiyo, qaansoleyda la shido ama fiyuusku safro. Haddii korontada iyo khadadka xogta lagu rakibo isbarbar socda, nidaamyo xasaasi ah ayaa lagu faragelin karaa ama la baabi'in karaa.
Ilaalinta korontada iyo nidaamyada xogta
Ku-meelgaarka wax-u-dhimista ah ee guryaha, xafiisyada iyo dhismayaasha maamulka iyo dhirta warshadaha ayaa laga yaabaa inay ka dhacaan, tusaale ahaan, nidaamka bixinta korontada, nidaamka teknolojiyada macluumaadka iyo nidaamka taleefanka, nidaamyada xakamaynta ee goobaha wax soo saarka iyadoo loo marayo garoonka diyaaradaha iyo ilaaliyayaasha hawo-qaboojinta ama nidaamyada nalka . Nidaamyadan xasaasiga ah waxaa kaliya lagu ilaalin karaa fikrad ilaalin oo dhameystiran. Xaaladdan dhexdeeda, adeegsiga isku dubaridan ee aaladaha ka hortagga kor u kaca (hillaaca hadda jira iyo kuwa soo kordha) ayaa muhiim ah.
Shaqada hillaaca hadda qabta ayaa ah inay ka soo baxaan tamar badan iyadoo aan la baabi'in. Waxaa loo rakibay sida ugu dhow ee suurtogalka ah illaa meesha nidaamka korontada ka soo galo dhismaha. Qabqablayaasha kacsan, markooda, waxay ilaaliyaan qalabka terminalka. Waxaa loo rakibay sida ugu dhow ee suurtogalka ah qalabka si loo ilaaliyo.
Iyada oo leh qoyskeeda wax soo saarka Cas / Khad oo loogu talagalay nidaamyada tamarta korontada iyo qoyskeeda wax soo saarka Yellow / Line ee loogu talagalay nidaamyada xogta, THOR waxay siisaa qalab ilaaliya kor u qaadista iswaafajinta. Xayeysiinta qaybsan ayaa u oggolaanaysa hirgelinta kharashka ku habboon ee fikradaha ilaalinta dhammaan noocyada dhismaha iyo cabbirka rakibidda.